Isikrweqe sikaThixo: Ngaba iiNxalenye ezi-6 zichaziwe kwaye zinentsingiselo?
Ngaba uyazi Isikrweqe sikaThixo?
Njengasemfazweni, apho amajoni adinga izixhobo ezizodwa ezifana nee-bulletproof vesti, izigcina-ntloko zokukhusela iintloko zazo, izixhobo kunye nezinye izixhobo.
En el mundo Okwasemoyeni, sikwafuna isikrweqe esisikhuselayo nesisinceda sijamelane nazo zonke iinzingo ezinokuvela ebomini.
Kwilizwi likaThixo, ngokukodwa kwisahluko sokugqibela se-Efese, enye yeeleta awazibhalayo uMpostile uPawulosi, icebisa onke amakholwa ukuba asebenzise isikrweqe sikaThixo ukulwa nomubi kwaye akwazi ukufumana uloyiso.
Ilizwe lokomoya lisemfazweni engagungqiyo kwaye kungoko kufuneka sizilungiselele ngalo lonke ixesha.
1 Icandelo lendlela kaThixo
1.1 1: Ibhanti yenyaniso
1.2 2: Isigcina-sifuba sobulungisa.
1.3 3: Ukulungiswa kwevangeli
1.4 4: Ikhaka lokholo kwisikrweqe sikaThixo
1.5 5: Isigcina-ntloko sosindiso kwi Ingalo kaThixo
1.6 6: Ikrele lomoya kuMkhombe kaThixo
Icandelo lendlela kaThixo
Esi sikrweqe siquka uthotho lwezixhobo zokomoya, ukuze wazi ukuba zisetyenziswa njani, yiyo loo nto ke sikuxelela yonke into oyidingayo ukuze uzikhusele ngesixhobo sokomoya.
1: Ibhanti yenyaniso
Ibhanti yenyaniso ibizwa ngegama kwabase-Efese 6:14. Ngokwasemzimbeni nakumaxesha amandulo, amajoni ayenxiba ibhanti ukugcina ingubo yomzimba ixhasa umzimba.
Kwimo yokomoya, ibhanti iba lolo lwazi kunye nonqabiseko olusenza ukuba sime siqinile, siqinisekile ukuba sikho Oonyana bakaThixo, nangona ongendawo efuna ukukholisa thina ngenye indlela.
Ukuze sisebenzise ngokufanelekileyo ibhanti lenyaniso iintliziyo zethu kufuneka zizaliswe lilizwi leNkosi kufuneka sizomeleze ngomthandazo. Kufuneka siphile ubomi obuqinileyo nobungqingqwa ngendlela kaKristu.
2: Isigcina-sifuba sobulungisa.
Kanye njengakumaxesha akudala yayikhona igobolondo, eyayigutyungelwe amalungu angaphakathi, njengoko sazi ngoku njenge-bulletproof vest.
Amajoni ahamba kwihlabathi lokomoya kufuneka azigcine iintliziyo zethu kulo lonke uhlaselo lotshaba.
Isigcina-sifuba sobulungisa iba sisigqumathelo esisinika sona Ubulungisa ukuba sifikelela ngoYesu kunye nedini awasenzela lona ngumnqamlezo weKalvari.
Ukuze siyisebenzise ngokuchanekileyo kufuneka sikhumbule ukuba ngubani na kuKristu, samkele ukuba ngenxa yombulelo wakhe, kukuba sizekwe tyala phambi koyise wasemazulwini.
Asinakukholwa into esixelelwa lutshaba okanye izityholo zazo okanye sikhumbule ubomi bethu bangaphambili okanye izono zethu.
Ezo ziqhinga longendawo ukuze asenzakalise kwaye sisigcina-sifuba sobulungisa kuphela esisikhusela kolu hlaselo.
3: Ukulungiswa kwevangeli
Yonke imfazwe kufuneka ikhusele iinyawo zayo kuhlaselo kuba zikwayindawo ekujolise kuyo kutshaba.
Ukuba ijoni alizinzanga ekuhambeni kwalo, kulula ukushenxisa. Amajoni kufuneka athabathe amanyathelo aqine kwaye akhuselekile, ngaphandle kokuthandabuza okanye kukoyika.
Izihlangu zevangeli zimele ukunxiba ngokukhuselekileyo, thembela into akunike yona iNkosi, hlala uqinile endleleni.
Zalisa ngoxolo, uvuyo nothando kwaye uvumele oku ukuba kusasazeke nakwabo bakungqongileyo. Ubizo kukushumayela iVangeli kuyo yonke indalo.
Ngamanyathelo akhuselekileyo ahlala ejonge ukuba anganyatheli kuwo nawuphi na umgodi okanye nayiphi na into ebukhali enokuthi ishiywe lutshaba endleleni. Ukusoloko usiya phambili kwaye ungaze uxhasa, ukhula ebukumkanini bukaThixo.
4: Ikhaka lokholo kwisikrweqe sikaThixo
Apha umpostile uPawulos usishiya imiyalelo yokusetyenziswa kwesihlangu sokholo. Siyazi ukuba ikhaka sisixhobo sokuzikhusela esinokusinceda edabini ukuze kungabikho nalunye uhlaselo oluya kuthi.
Kwilizwe lokomoya sikwadinga nekhaka kuba utshaba luphosela imitya ethi, ukuba ifikelela kuthi, inokusenzakalisa kakhulu.
Ikhaka lokholo lisetyenziswa ngokuchanekileyo xa ukholo lwethu lomeleziwe. Kule nto kufuneka sifunde ilizwi likaThixo, ndilicengceleze kwaye, okona kubaluleke kakhulu, silisebenzise.
Masikhumbule ukuba ukholo lunjengomsipha othi ukuba awuzilolongeli emva koko, masisebenzise ukholo kwaye someleze ukuze lusikhusele kuko konke ukuhlaselwa ngumntu okhohlakeleyo kuthi.
5: Isigcina-ntloko sosindiso kwi Ingalo kaThixo
Isigcina-ntloko sisigcina-ntloko esikhusela intloko yejoni. Elona candelo libalulekileyo kuzo zonke izixhobo.
Ingqondo yethu yidabi lokwenyani kwaye yinto ekulula ukujolisa kuyo notshaba kuba ihlasela ngqo kwiingcinga zethu isenza sigqibe okanye isenze sikholelwe izinto ezingalunganga ngokwelizwi leNkosi.
Sinxiba isigcina-ntloko okanye isigcina-ntloko sosindiso xa sikhumbula ngawo onke amaxesha ukuba sisindisiwe ngokholo kwaye leyo yinyaniso engenakuguqulwa.
Kufuneka silwe kwaye silwe neengcinga ezimbi ngelizwi likaThixo kuba esithanda kwaye esixolele zonke izono zethu.
6: Ikrele lomoya kuMkhombe kaThixo
Apha kukho umahluko omkhulu kuba ezinye izixhobo zezokukusikhusela kodwa oku kubalulekile kuba senziwe ngendlela ukuze sikwazi ukuhlasela ubungendawo. Ngekrele singazenzakalisa kwaye sibulale utshaba ngalo lonke ixesha sifuna ukungena ngendlela yethu.
Ngayo singazikhusela kwaye sikhanyise indlela esihamba ngayo, siqinisekile ukuba inamandla kwaye, ukuba siyayazi indlela yokuyisebenzisa, siya kuphumelela.
Ukuze siyisebenzise ngokufanelekileyo ikrele lomoya kufuneka sigcwaliswe lilizwi likaThixo kuba ikrele liyasebenza xa sithetha ilizwi lakhe. Kubalulekile ukuba sikwazi ukuyisebenzisa ngempumelelo kuyo yonke imeko kwaye xa siyenza iphumelele ebomini bethu.
Khumbula ukuba iBhayibhile ifana nencwadi yobomi kwaye ukuze la magama abe namandla kufuneka senze izinto ezibonisiweyo apho.
Zonke izikrweqe zokomoya zisebenza ngokholo kwaye zomelezwe phakathi yomthandazo.
Okukhona sifunda ilizwi lakhe, kokukhona siya kuba nokholo ngakumbi, siya kuba nakho ukusebenzisa izixhobo zethu ngokufanelekileyo. Umthandazo yeyona nto iphambili kuyo yonke into, ukunxibelelana noMoya oyiNgcwele kuya kusikhokelela ukuba siphile ngokwentando kabawo osezulwini.
Oktobha 12, 2019
NgoSeptemba 27, 2019